Archive du 20180822
Marc Ravalomanana Efa niomana hatramin’ny 2009
Efa mipetrapetraka ny paikady ary tsy tonga hitsangantsangana i Marc Ravalomanana niverina eto fa hanaporofo ny mbola hilan’ny firenena sy ny vahoaka Malagasy azy.
Fifidianana Filoham-pirenena 46 ireo kandida
Lasan’i Madagasikara ny amboaran’ny fifaninanana izay be kandida filoham-pirenena indrindra eto ambonin’ny tany.
Didier Ratsiraka Tsy mbola milavo lefona
Tsy nofinofy ary tsy kihonohono fa anisan’ireo nandrotsaka ny antontan-taratasiny hofidiana filoham-pirenena amin’ny 7 novambra izao ny Amiraly Didier Ratsiraka,
Magro Toliara Miandrandra 1er tour de vita
Nivory niaraka tamin’ny KOM-TIM, FOKO-TIM, JEUNE-TIM, araka ny antson’Atoa Sazalahy Tsianihy mpandrina ny Faritra Atsimo-Andrefana tao amin’ny Magro Toliara ny sabotsy 18 Aogositra 2018 teo,
Samy maika daholo..
O ry Tanindrazanay Malala! Te hitondra anao daholo ry bodo sy ry adala Telopolo mahery ireo nilatsaka an-tsitrapo. Samy te ho lohany, maniry ny ho filoha.
Aretin-kibo vokatry ny fisotroana rano maloto Mahafaty, hoy ny mpitsabo
Mahatratra 14.000 isan-taona ankehitriny ireo Malagasy mamoy ny ainy vokatry ny aretim-pivalalana ateraky ny fisotroana rano tsy voadio.
Tanora zanaky ny Faritra Atsimo Tsy manaiky ny tetikasa Toliara Sands
Nanao fanambarana tetsy amin’ny Telozoro Andrefanambohijanahary ny fikambanana Tanora zanaky ny faritra Atsimo omaly talata 21 aogositra.
Fitotongan’ny toekaren’i Madagasikara Mila atosika haingana ny sehatra fampianarana
Ankoatra ny tokony hisian’ny fanjakana tsara tantana sy ny ady amin’ny kolikoly dradradradrain’ny mpahay toekarena eto Madagasikara dia misy ny sehatra hafa tsara jerena maika eto amin’ny firenena.